Manamarina transistor: nohazavaina tsikelikely ary amin'ny fomba mora | Fitaovana maimaim-poana
Isaac | 23/09/2021 09:00 | Fitaovana elektronika
Fotoana vitsy lasa izay dia namoaka tutorial momba ny fomba ahafahanao manao izany izahay jereo capacitors. Ankehitriny dia anjaran'ny iray hafa singa elektronika tena ilaina, ahoana ity. Eto ianao dia afaka mahita ny fomba jereo ny transistor nanazava tamin'ny fomba tsotra sy tsikelikely, ary azonao atao amin'ny fitaovana toy ny mahazatra toy ny multimeter.
ny transistors dia be mpampiasa amina boriboritany elektronika sy elektrika marobe mba hifehezana ity fitaovana mivaingana ity. Noho izany, noho ny fahita matetika azy ireo, dia azo antoka fa hahita tranga izay tsy maintsy hijerenanao azy ireo ianao ...
1 Inona no ilaiko?
2 Dingana tokony hijerena transistor bipolar
Inona no ilaiko?
Raha efa manana multimeter tsara, na multimeter, izany ihany no ilainao hitsapana ny transistor anao. Ie, ity Multimeter tsy maintsy manana ny asany izy mba hitsapana ireo transistors. Betsaka amin'ireo multimetatra nomerika ankehitriny no manana an'io endri-javatra io, eny fa na dia ny mora aza. Amin'izany no ahafahanao mandrefy ireo transistors bipolar NPN na PNP hamaritana raha kilemaina izy ireo.
Raha izany no izy dia tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny faladian'ny multimeter fotsiny ny pin telo an'ny transistor, ary apetraho eo amin'ny mpisafidy ilay hFE toerana handrefesana ny tombom-barotra. Azonao atao ny mahazo mamaky sy manamarina datasheet raha mifanaraka amin'ny tokony homeny.
Dingana tokony hijerena transistor bipolar
Mampalahelo fa tsy ny multimetatra rehetra no manana an'io fiasa tsotra io, ary amin'ny andramo amin'ny fomba tanana kokoa amin'ny multimeter rehetra dia tsy maintsy ataonao amin'ny fomba hafa izany, miaraka amin'ny asan'ny «Diode» andrana.
Ny zavatra voalohany dia ny manala ny transistor avy ao amin'ny circuit mba hahazoana famakiana tsaratsara kokoa. Raha singa mbola tsy nasiana solosaina io dia azonao atao ny mamonjy ity dingana ity.
fitsapana Base to Mpamoaka:
Ampifandraiso ny fotony (mena) mitarika an'ny multimeter amin'ny fotony (B) an'ny transistor, ary ny ratsy (mainty) mitarika mankany amin'ny emitter (E) an'ny transistor.
Raha transistor NPN amin'ny toe-javatra tsara izy dia tokony hampiseho fihenan'ny herinaratra eo anelanelan'ny 0.45V sy 0.9V ny metatra.
Raha ny momba ny PNP dia tokony ho hita eo amin'ny efijery ny voalohany OL (Over Limit).
fitsapana Base to Collector:
Ampifandraiso ny fitarihana tsara avy amin'ny multimeter mankany amin'ny fotony (B), ary ny fitarihana ratsy mankany amin'ny mpanangona (C) an'ny transistor.
Raha NPN amin'ny toe-javatra tsara izy dia hampiseho fihenan'ny herinaratra eo anelanelan'ny 0.45v sy 0.9V.
Raha tratra PNP dia hiseho indray i OL.
fitsapana Mpamoaka to Base:
Ampifandraiso amin'ny emitter (E) sy ny tariby ratsy mankany amin'ny fotony (tariby) ny tariby tsara.
Raha NPN amin'ny toe-javatra tonga lafatra dia haseho OL amin'ity indray mitoraka ity.
Amin'ny raharahan'ny PNP dia aseho 0.45v sy 0.9V mitete.
fitsapana Mpanangona mankany ifotony:
Ampifandraiso amin'ny lafiny angovo ny lafiny tsara amin'ny multimeter (C) ary ny ratsy amin'ny fotony (B) an'ny transistor.
Raha NPN izy dia tokony hiseho eo amin'ny efijery OL mba hanondroana fa tsy maninona.
Raha toa ka misy PNP dia tokony ho 0.45V sy 0.9V indray ny drop raha tsy maninona.
fitsapana Mpanangona an'i Emitter:
Ampifandraiso amin'ny mpanangona (C) ny tariby mena ary ny tariby mainty amin'ny emitter (E).
Na NPN na PNP amin'ny toe-piainana tonga lafatra dia hampiseho an'i OL eo amin'ny efijery.
Raha averinao ny tariby, ny tsara amin'ny emitter ary ny ratsy amin'ny mpanangona, na amin'ny PNP na NPN, dia tokony hamaky OL koa.
misy fandrefesana samihafa izany, raha vita tsara, dia hanondro fa ratsy ny transistor. Tsy maintsy mihevitra zavatra hafa koa ianao, ary izany dia ireo fitsapana ireo ihany no mahatsikaritra raha toa ka manana lalan-kely ny transistor na misokatra izy ireo, fa tsy olana hafa. Noho izany, na dia mandalo azy ireo aza izy ireo, ny transistor dia mety manana olana hafa manakana ny fiasa marina.
Amin'ny tranga a FET transistor, fa tsy bipolar, dia tokony hanaraka ireo dingana hafa ireo ianao amin'ny multimeter nomerika na analog anao:
Ataovy ao anaty fiasa fitsapana diode ny multimeter anao, toy ny taloha. Avy eo apetraho eo amin'ny terminal Drain ny fizahana mainty (-), ary ny probe mena (+) eo amin'ny terminal Source. Ny valiny dia tokony ho famakiana 513mv na mitovy amin'izany, miankina amin'ny karazana FET. Raha tsy azo ny vakiteny dia hisokatra ary raha tena ambany dia ho fohy ny lalana.
Aza esorina amin'ny tendrony ny tendrony mainty, apetraho eo amin'ny vavahadin'ny vavahady ny tendrony mena. Ankehitriny ny fitsapana dia tsy tokony hamerina famakiana. Raha mampiseho valiny eo amin'ny efijery izy io, dia hisy fivoahana na lalan-kely.
Ataovy ao anaty loharano ny tendrony, ary hijanona ao anaty tatatra ilay mainty. Ity dia hizaha toetra ny fihaonan'ny Drain-Source amin'ny alàlan'ny fampiatoana azy ary hahazoana famakiana ambany momba ny 0.82v. Mba hamonoana ny transistor, ny terminal telo (DGS) dia tokony hivezivezy fohy, ary hiverina avy eo amin'ny fanjakana mankany amin'ny fanjakana tsy miasa izy io.
Amin'izany dia azonao atao ny manandrana ireo transistors karazana FET, toy ny MOSFETs. Aza adino ny manana ny toetra ara-teknika na datasheets amin'ireto mba hahafantarana raha ampy ny soatoavina azonao, satria miovaova arakaraka ny karazana transistor ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Manamarina transistor: nohazavaina tsikelikely
Fifandimbiasana ankehitriny sy ankehitriny mivantana: fahasamihafana sy fitoviana